Sondeza iModyuli yeKhamera
Uluhlu lwe-Ultra Long Range
Uluhlu lweNdawo ende
Uluhlu oluqhelekileyo loSondeza
Imodyuli yekhamera yedijithali
Imodyuli yeKhamera eshushu
12um 1024 * 768 Ubushushu
17um 640 * 512 Ubushushu
12um 640 * 512 Ubushushu
Imodyuli ye-EO / IR yekhamera
Ikhamera ye-PTZ Dome
Ikhamera ye-PTZ yeZithuthi
Ikhamera ye-PTZ enzima
I-EO / IR Gimbal
IiKhamera zeThermal ezisetyenziswa kakhulu
Nayo nayiphi na into kwindalo engaphezulu kobushushu obuqinisekileyo (-273 ℃) inokuphakamisa ubushushu (amaza ombane) ngaphandle. Amaza ombane amade okanye amafutshane, kwaye amaza ane-wavelengths aqala kwi-760nm ukuya kwi-1mm abizwa ngokuba yi-infrared, engenakubonwa ngeliso lomntu. Ephakamileyo i-temperatu ...
Kutheni le nto sikhetha i-Multi Sensor Camera?
Ngokuphuculwa okukhawulezileyo kwesayensi kunye netekhnoloji, iintlobo ezahlukeneyo zeenkqubo zokujonga ividiyo ezibandakanya indawo yokuhlala, uthungelwano lwezothutho kunye nezothutho, izitishi kunye neetheminali zenziwe ngokukhawuleza. Intsebenziswano yeekhamera ezibonakalayo nezishushu akusekho ...
Ikhamera ye-NDAA engahambelaniyo neHelilicon
Ukulungiselela ukumelana nezithintelo ze-NDAA zase-US, sisandula ukuvelisa ikhamera ye-4K engeyiyo i-Hisilicon ene-SigmaStar yokusebenza okuphezulu: i-4K / 8Megapixel 50x Range Zoom Network Camera Module. I-SG-ZCM8050NS-O: 1 / 1.8 ”Isandi somboniso weSony Exmor ye-CMOS. Ukusondeza ngamandla kwe-50x ebonakalayo (6 ~ 300mm). Ubukhulu. I-4K / 8Mp ...
Izinto eziluncedo zeekhamera zokujonga ubushushu
I-infrared thermal camera imaging inokufumana ulwazi oluthile lwento elinganisiweyo ngokufumanisa ubushushu bokusasazwa kwento elinganisiweyo, kubandakanya ukwakheka kwangaphakathi kunye nendawo ethile yento leyo. Izinto ezintathu eziluncedo kwiikhamera zokujonga ubushushu: 1. Kukhuselekile ...
Yintoni i-infrared laser camera?
Yintoni ikhamera ye-infrared laser? Ngaba ukukhanya kwe-infrared okanye i-laser? Nguwuphi umahluko phakathi kokukhanya kwe-infrared kunye nelaser? Ngapha koko, ukukhanya kwe-infrared kunye nelaser ziikhonsepthi ezimbini ezikumanqanaba ahlukeneyo, kwaye i-laser ye-infrared yinxalenye yendlela yokuhlangana kwezi ngcamango zimbini: ubude obubonakalayo bokukhanya ...
Infrared imaging ikhamera yesicelo sokhuselo
Kwiminyaka yakutshanje, ikhamera ye-infrared imaging ibaluleke kakhulu kwizicelo zokukhusela umda. 1.Ukubeka esweni iithagethi ebusuku okanye phantsi kwemeko zemozulu ezibi: Njengoko sisazi, ikhamera ebonakalayo ayinakusebenza kakuhle ebusuku ukuba ngaphandle kokukhanyisa kwe-IR, umfanekiso we-infrared thermal umamela nje ...
Iimpawu zekhamera eshushu kunye neNzuzo
Kule mihla, ikhamera ye-thermal isasetyenziswa ngokubanzi kwizicelo ezahlukeneyo, umzekelo, uphando lwezeNzululwazi, izixhobo zombane, uphando ngomgangatho wolawulo lwe-R & D, ukuhlolwa kophahla, uMkhosi kunye nokhuseleko. Sikhuphe iintlobo ezahlukeneyo zekhamera ye-thermal ...
Ikhamera ecetyisiweyo SG-ZCM2030DL ukubuyisela i-SONY Camera
Sineentlobo ezahlukeneyo zekhamera yokusondeza imodyuli, kubandakanya inethiwekhi ye-zoom yekhamera kunye ne-digital zoom camera (LVDS), njengoko sisazi, iimodeli ezininzi ze-SONY ziyekisiwe ngoku, kwaye uninzi lwabasebenzisi lusebenzisa i-30x zoom camera digital SG-ZCM2030DL ukubuyisela ikhamera ye-SONY FCB- I-EV7520 kunye ne-FCB-EV7520A, kwaye ine-perf elungileyo kakhulu ...
Ikhamera entsha ye-OIS
Sisanda kukhupha ikhamera entsha ngoDisemba, ngo-2020: 2Megapixel 58x Range Zoom Network Output OIS Camera Module SG-ZCM2058N-O Iimpawu zokuKhanya okuPhakamileyo: 1.OIS inqaku le-OIS (ukuzinzisa umfanekiso ozinzileyo) kuthetha ukufezekisa ukuzinza komfanekiso ngokuseta kwezinto ezibonakalayo , ezinje ngelensi yentsimbi, ukuya ...
Yintoni Defog Camera?
Uluhlu olude lwe-zoom yekhamera ihlala ineempawu zokuzikhusela, kubandakanya ikhamera ye-PTZ, ikhamera ye-EO / IR, esetyenziswa ngokubanzi kwezokhuseleko nakwezomkhosi, ukubona kangangoko kunokwenzeka. Zimbini iintlobo eziphambili zetekhnoloji yokungena kwenkungu: 1.Optical defog camera Ukukhanya okuqhelekileyo okubonakalayo akunakungena emafini nakumsi, kodwa kufutshane ...
Umsebenzi wokukhuseleka kokubonakalayo kwiimodyuli zenethiwekhi zeSavgood
Iikhamera zokujonga ezifakwe ngaphandle kulindeleke ukuba zime uvavanyo lwe-24/7 ngokukhanya okuqinileyo, imvula, ikhephu kunye nenkungu. Amasuntswana eAerosol kwinkungu anengxaki ngakumbi, kwaye ahlala engoyena nobangela wokuthotywa komgangatho womfanekiso. Imozulu ishushu ...
I-infrared Thermal kunye noLuhlu olude lweKhamera ebonakalayo yoKhuseleko lweMida
Ukukhusela imida yesizwe kubalulekile kukhuseleko lwelizwe. Nangona kunjalo, ukufumanisa abo bangangenelela okanye abashushumbisayo kwimozulu engalindelekanga kunye nemeko emnyama ngokupheleleyo ngumceli mngeni wokwenene. Kodwa iikhamera zokujonga ubushushu ze-infrared zinokunceda ukuhlangabezana neemfuno zokufunyanwa kwi-l ...
I-Savgood ikhupha i-Zoom block Camera ehamba phambili emhlabeni kune-800mm stepper driver driver Auto Foucs Lens.
Uninzi lwezisombululo zeLong Range zoom zisebenzisa ibhokisi yebhokisi eqhelekileyo kunye neelensi ezihamba ngemoto, ngebhodi eyongezelelekileyo yokuGxila kwiZenzekelayo, kwesi sisombululo, kukho ubuthathaka obuninzi, ukusebenza ngokuGxilwe ngokuGxilwe ngokuLula, kuya kuphosa ukujolisa emva kokusebenza ixesha elide, isisombululo sonke sinzima kakhulu ikhamera kunye ne ...
Isitalato i-406 Xintiandi, kwisiXeko saseHangzhou, China
© Copyright - 2013-2020: Onke amalungelo agciniwe.